Yintoni i-Forex Pip, indlela yokuyisebenzisa? Funda i-2 yoRhwebo ngoJanuwari 2022
Zithini iiPips ze-Forex? Funda isiKhokelo sesi-2 soRhwebo ngo-2021!
Iipips kwi-Forex? wonke umntu unesitayile esahlukileyo sokurhweba. Emva kwayo yonke loo nto, kukho amakhulukhulu ezicwangciso ezahlukeneyo, iikhonsepthi kunye neengcebiso kunye namaqhinga phaya ukuze athathelwe ingqalelo.
Ukuba ukhe waliva igama elithi 'iipipi' kunye 'neepipettes' eziphoswe ngeenxa zonke, kodwa abaqinisekanga ngokupheleleyo ukuba ziyintoni-ke sukujonga phambili. Sikukhusele.
Kubaluleke kakhulu xa kuthengiswa i-forex ukuze ube nokuqonda malunga nendlela yokutshintsha kwamaxabiso, kwaye oku kulinganiswa kwaye kuboniswe njani kuwe njengomrhwebi.
Yilapho iipip kunye nokusasazeka kungena khona. Unoko engqondweni, namhlanje sigxile kwenye yezona zinto zibalulekileyo kurhwebo lwe-forex, kwaye ezo ziipips ze-forex.
Sibeke isikhokelo esibanzi kwiipips ze-forex, ezigubungela yonke into ukusuka kwinto eziyiyo, indlela yokuzibala, ukuba zisebenza njani iipipettes nokunye okuninzi.
Yintoni kanye kanye iPip?
Igama elithi 'umbhobho' yinto oza kuyibona kwaye uyive okuninzi kwihlabathi lokurhweba kwangaphambili, ke kubalulekile ukuba uthathe ixesha lokuqonda ukuba kuthetha ukuthini.
Iipipi ezisetyenziselwa ukumela nokuba 'lixabiso lenzala' okanye 'ipesenti yenqaku'. Kodwa, izinto zitshintshile kancinci ukusukela kwimvelaphi yombhobho. Ngokuqinisekileyo ngekhe uve abantu bethetha 'ngamanqaku', 'iipipettes' kunye 'neqashiso', kodwa ngaphezulu kamva.
Kwiintsuku zokuqala, umbhobho ubumele elona nyuko lincinci ukuba ixabiso le-forex litshintshe. Kule mihla, iindlela abathengisi kunye nabathengisi bexabiso lezinto zininzi ngakumbi kwendlela echanekileyo. kunjalo, i-forex ihamba namaxesha.
Ngokwesiqhelo amaxabiso e-forex asetyenziselwa ukucatshulwa kwiindawo ezine zokugqibela, ngombhobho omnye uyindawo yokugqibela yedesimali ecatshuliweyo (ke intshukumo yenqaku elinye). Oku kwakudla ngokuba ngumzekeliso wentshukumo encinci okanye indlela yokulinganisa.
Umzekelo woku iya kuba ukuba i-GBP / USD isuka kwi-1.1040 iye kwi-1.1041, utshintsho kwixabiso apha lulingana nombhobho omnye.
Yonke le nto itshintshe kancinci kule minyaka idlulileyo, kuba imibhobho ayisoloko ihleli gqibela indawo yedesimali kwikoteyishini kwakhona. Kungenxa yokuba amanye amaxabiso e-forex abandakanya eyongezelelweyo indawo yedesimali.
Ngaphandle kolu tshintsho, umbhobho uselixabiso elingaguquguqukiyo elisetyenziswa liqonga ngalinye kunye nefemu yabarhwebi. Yimilinganiselo ebalulekileyo emiselweyo evumela abathengisi ukuba banxibelelane ngokwemigaqo yabo ngendlela elula ngakumbi nesebenzayo.
Umbhobho ngowona gem kwizithsaba zesithsaba sokuqonda kwemali yorhwebo, njengoko ibeka isakhelo kunye.
Ngokusisiseko, ngaphandle kweli xabiso limiselweyo kuyo yonke ibhodi, bekuya kufana nokuthelekisa ii-apile kunye neebhanana. Kananjalo, kuya kuba nzima ngakumbi ukuba abathengisi baxoxe ngemigaqo ngaphandle kwento eqhelekileyo.
Sebenzisa ubulumko bakho kwiNtengiso ye-Forex
Kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba xa ufuna ukuthenga imali kufuneka uthenge ngexabiso 'lokubuza' kwaye uthengise ngexabiso 'lokubhida'. Esi sesinye sezizathu zokuba ukuqonda umbhobho kubalulekile kwimizamo yakho yokurhweba kwangaphambili.
Masicinge ukuba inkqubo yakho yorhwebo ifuna ukuba wenze inzuzo ngeepips ze-25 kunye nelahleko ephezulu yeepips ze-10 ngokulahleka kokuyeka. Zimbini kuphela iindlela ekunokwenzeka ngazo oku:
Unokongeza ixabiso lakho lokuthatha inzuzo kulelo xabiso lakho livulekileyo kwaye unciphise ixabiso lokulahleka lokuyeka, zonke zikwinqanaba elifanayo. Oku kuzokunciphisa amathuba okuba ufikelele kwilahleko yakho yokumisa, ngelixa unciphisa umngcipheko wokuba inzuzo yakho ityiwe.
Olunye ukhetho kukususa sasaza ukusuka ekuthatheni inzuzo kunye nokulahleka kwakho kokuyeka. Oku kuthetha ukuba unethuba elilinganayo lokufikelela kwilahleko yakho yokumisa kwaye uthathe inzuzo. Kodwa, kufanelekile ukukhumbula ukuba oku kuya kuphucula ukuthatha kwakho inzuzo. Kwangelo xesha, unokunyusa ilahleko xa kufikwa kwilahleko yokuyeka kwakho.
Ukujonga kunye nokuqonda ukusasazeka kunikezelo kuya kukunika ithuba elikhulu lokuphumelela kwimarike ye-forex. Sigubungela oku ngakumbi kamva.
Libalwa njani ixabiso lePip
Ngenxa yento yokuba umbhobho ngamnye uya kuba nexabiso lamaxabiso, ixabiso lombhobho kufuneka libalwe kwisibini esithile semali.
Ngaba ngokwenene kufuneka ube nolwazi olunzulu ngokubala ixabiso lombhobho? Ewe hayi hayi ngokukodwa. Ngokubanzi, umrhwebi wakho uza kubonisa ngokuzenzekelayo ixabiso lombhobho elihambelana nemali yeakhawunti yakho.
Nangona kunjalo, ukuqonda ngokuthe ngqo ukuba iikowuteshini zakho zibalwa njani kunokuba luncedo ekugcineni isicwangciso sakho sorhwebo kunye nokulawula umngcipheko. Ikwayindlela elungileyo yokulinganisa ubunzima obunokubakho kunye nelahleko.
Masithi unomdla ekuthengiseni isibini semali se-GBP / i-USD.
Uthenga inani eli-1. 1 iqashiso liya kuba ne-100,000 GBP, kwaye ixabiso lombhobho omnye li-0.0001 ye-GBP / USD.
Oku kuthetha ukuba ixabiso lemali yepip eyi-1 kwilot enye iya kuba yi-1 x 100,000 = 0.0001 yeedola zaseMelika.
Ke uyazi ukuba inzuzo okanye ilahleko yesi sithuba semali ye-forex sinokuxabiswa nge-10 leedola zaseMelika kumbhobho ngamnye.
Njengoko isibini semali ngasinye sinexabiso laso lombhobho siza kujonga iikowuti ngazo zombini iindawo ezine nezimbini zedesimali ngokweenkcukacha ezithe kratya.
Ukwenza izinto zibe lula siza kusebenzisa i-GBP / USD kunye ne-USD / JPY.
Ireyithi yesibini semali ye-GBP / i-USD yi-1.2675.
Oku kuthetha ukuba i-1 GBP ilingana ne-1.2675 USD.
Ngoku ukubala ixabiso lombhobho xa kufikwa kwixabiso lesiseko (kule meko i-GBP) kuya kufuneka uphindaphinde ukutshintsha kwexabiso kwimali yesibini (kule meko ye-USD) ngezinga lotshintshiselwano.
Nantsi indlela eya kujongeka ngayo: 0.0001 * (1 / 1.2675 = 0.0000788955).
Ngoku kufuneka uliphindaphinde elo nani ngenani leeyunithi kwindawo ofuna ukuyithenga.
Ke, masithi ubungakanani beqashiso lakho ngama-200,000. Oku kuthetha ukuba utshintsho olunye kumbhobho luya kukuxabisa nge- $ 15.77.
Ukuba ireyithi yemali ye-USD / ye-JPY ime kwi-106.76, sinokuthi ngokuzithemba i-1 USD ilingana ne-106.76 Yen.
Ngoku endaweni yokusebenzisa iindawo ezine zokugqibela ukubala umbhobho, siza kusebenzisa ezimbini.
Kule meko, ukubala kujongeka njengoku: 0.01 * (1 / 106.76) = 0.000093668.
Ke, masithi ubungakanani beqashiso lakho ngama-200,000. Usebenzisa indlela yokubala efanayo, utshintsho lombhobho omnye luya kukuxabisa $ 1. Ke, unayo, kule meko inokuba lixabiso lakho lokulinganisa.
Nceda uqaphele ukuba ngenxa yokuba izinga leemali lihlala liguquguquka, naliphi na ixabiso elichazwe apha kufuneka libalwe njengokusondela kwexabiso. Kananjalo, kukho ukungaguquguquki rhoqo kwixabiso lombhobho omnye.
Njengoko besitshilo, khumbula ukuba ukuba uyafuna ukwazi ixabiso lakho lombhobho ungayifumana kwiqonga lakho lokuthengisa. Awunyanzelekanga ukuba uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde ubuze ukuba ubalwa njani.
Ngoku uxhobile ngeemfumba zolwazi oluncedo ngokubhekisele kwiipips, unengcinga efanelekileyo yeziphumo ezinokuba nazo kuthengiso lwakho lwe-forex.
Ngokubhekisele ekuthatheni izigqibo zorhwebo lwe-forex, iipipi zidlala indima ebalulekileyo kwisiphumo sorhwebo ngalunye. Kananjalo, kubalulekile ukuba ufunde kangangoko unakho apha endleleni.
Izitenxo zePip Forex kunye neePipettes
Ngokufanelekileyo, 'i-pipette' ilingana ne-1 / 10th yombhobho oqhelekileyo. Iipiphethi zihlala zibizwa ngokuba 'ziiPips eziqingqiweyo'. Njengoko besesitshilo, uninzi lweekowuteshini zamaxabiso ozifumanayo kwi-forex broker yakho ziya kusebenzisa amanqaku amane okugqibela.
Nangona kunjalo, abanye abathengisi bacaphula iipipettes xa isibini semali ekuthethwa ngaso siphuma ngaphandle kwesiqhelo esi-2 nesi-4 sedesimali. Ngamanye amaxesha banokuba neendawo ezi-3 ne-5 endaweni yoko. Esona sizathu soku kukuba kukho umahluko omkhulu kwixabiso. Umzekelo obalaseleyo woku ngaphandle komthetho yiperi yemali ebandakanya iYen yaseJapan.
Masicinge ukuba i-GBP / iXabiso lixabiso kwi-1.2675
Ngoku, isibini semali i-USD / JPY siza kuboniswa njenge-106.76.
Njengoko unako, yabona ukuba kukho umahluko omkhulu kwixabiso phakathi kwezi zibini.
Sebenzisa lo mzekelo, kwi-1 GBP unokufumana phantse i-1.30. Nge-1 yeedola, unokufumana phantse i-Yens ezingama-107 zaseJapan. Apho ubona isibini sesibini sinamanani amabini emva kwenqaku lokugqibela, umbhobho kwesi sibini uboniswa linani lesibini.
Ke njengokuba besichukumisile ngaphambili, umbhobho ubusetyenziselwa ukuba lelona candelo lincinci lokulinganisa kuyo yonke ibhodi, kodwa akusekho njalo.
Njengoko itekhnoloji iqhubile kwaye urhwebo kwi-Intanethi luthandwa ngakumbi kunangaphambili, bekukho isuntsu le shakeup. Izikowuteshini zakho ngoku ziya kuchaneka ngakumbi kwaye zibandakanya indawo yesi-5 neye-3 yedesimali ngokunjalo. Oku kuyaqwalaselwa kwizibini eziqukethe i-4 kunye ne-2.
Ayikokubhidanisa, kodwa isiseko sepayipu simi ngoku. Ke, ukuba isicatshulwa sakho sineendawo ezi-4 zokugqibela, umbhobho linani lesi-4. Ukuba ikowuteshini yakho ineendawo ezimbini, umbhobho linani lesibini (emva kwenqaku ledesimali). Njengoko besitshilo, kukho amagama ahlukeneyo eepipettes ezinje 'ngamanqaku' kunye 'neepips eziqhekezayo'.
Nokuba umrhwebi ubabiza njani, zibalulekile ekuvavanyeni utshintsho oluncinci kwizibini zemali. Ziluncedo ekubekeni amashishini amancinci eyindlela esetyenziswa ngokuxhaphakileyo 'ngabaqweqwedisi'.
Lithetha ntoni inani ngalinye kwiKoteyishini yamaXabiso aPhambili?
Ukunceda ukucoca i-forex yeepips mist ngakumbi, Sifake inkcazo emfutshane yokuba inani ngalinye kwisicatshulwa sakho se forex limele ntoni.
Ukwenza izinto lula, masithi ikoteyishini yakho ngu-1.23456:
1 = 10,000 iipayipi
2 = 2,000 iipayipi
3 = 300 iipayipi
4 = 40 iipayipi
5 = 5 iipayipi
6 = 0.6 iipayipi
Ngelixa lo mzekelo ungasentla ungangqinelani, ngethemba, kuyanceda ukuba uqonde ukuba lithetha ntoni inani ngalinye kwikowuti ye-forex.
Ukurhweba ngeePips kwimizekelo
Ukwenza izinto zibe lula, uninzi lwabarhwebi lubala urhwebo lombhobho omnye njengeeyunithi ezilishumi (isiseko semali). Kodwa, njengoko unokuxela kwimizekelo yethu apha ngasentla kukho kuphela uqikelelo lwe-10.
Ukuba uthatha isigqibo sokubala iilahleko ezinokubakho kunye neenzuzo kwiipips, kuya kufuneka ke uqiniseke ukuba ixabiso lemipu yakho liphezulu. Ukuba akunjalo, ngekhe ukwazi ukwenza oku ngendlela echanekileyo
Ngexesha lesi sikhokelo, siza kusebenzisa imizekelo efanayo yeebhanari zemali kunye namaxabiso. Kwenza kube lula ukuyiqonda ngenqanaba lokuhamba kunye nokuqhelana.
Iibhanki zemali ezimbini / i-USD: Masicinge ukuba uthenge i-USD 100,000, usebenzisa ireyithi kumzekelo we-1.2675.
Ngoku siyazi ukuba utyalomali lwaluyi- £ 126,750.
Ngoku masithi inqanaba lenyuka kwiiyure ezimbalwa ezizayo ukuya kwi-1.2689, eyi-14 iipips ngaphezulu kunakuqala.
Ukuba uthatha isigqibo sokuvala urhwebo lwakho ngoku, iinzuzo zakho ziya kuphindaphindwa nge-14 ngexabiso lombhobho obalwe ngentla (£ 15.77). Oku kulingana ne- £ 220.78.
Intlawulo yesibini USD / JPY: So ngoku uthengisa i-1 eyodwa ye-USD / JPY nge-106.76.
Elinye iqashiso lilingana ne- $ 100k, eyi-10,676,000 yeJapan Yen.
Kule meko, njengoko ixabiso lichasene nawe, unokugqiba ekubeni unikezele ngo-106.82 JPY.
Ekuphela kwendlela onokufumana ngayo i-100,000 yakho eyiedola kukuhlawula ireyithi entsha eyi-10,676,112.38.
Umahluko kwiipips yi-112.38.
Kwakhona, uyabona ukuba ukubala iipip kuyindlela eluncedo kakhulu yokumisela kwangaphambili ilahleko okanye iinzuzo.
Iibini ze-Forex Volatility
Siqwalasele ukubaluleka kweepip kurhwebo lwangaphambili. Xa kuziwa kukungazinzi kwezibini zangaphambili, oku kuhlala kuboniswa zingaphi iipipsi ezihamba ngambini ngosuku.
Izibini zomnqamlezo zihlala zinamava okuhamba kweepip ezinkulu xa kuthelekiswa nezibini ezinkulu (imini yonke). Oku kunokubongwa kwimali ephantsi.
Ukungazinzi kombhobho weepara zemali ubukhulu becala kubulelwe kukungabinamali, ngenxa yokuba inani elincinci labathengi kunye nabathengisi linokuba nefuthe elikhuthazayo kwimo yokungazinzi. Ke izibini ezingaqhelekanga ezifana ne-USD / MXN kunye ne-EUR / HUF zaziwa ngokuhambisa amakhulu amawaka eepipi yonke imihla.
Abathengisi abaninzi be-forex bafunga ngokuxhasa iibini zemali eziguqukayo ngenxa yamathuba amaninzi orhwebo abawenzayo rhoqo.
Iipayipi ze Forex kunye nokusasazeka
Njengoko sele sichazile ukuba yeyiphi imibhobho kula macandelo angentla, mhlawumbi licebo elilungileyo ukukhankanya indlela ukusasazeka kwayo ekufuneka kuthathelwe ingqalelo. Ngamafutshane, ukusasazeka ngumahluko phakathi kwexabiso lokubhida kwaye ubuze ixabiso lemali nganye kwisibini. Oku kulinganiswa ngeepips, inkwenkwezi yephepha lanamhlanje.
Xa ugqibile ukuthengiselana uza kubona ilahleko (oku kukusasazeka). Isizathu kukuba uthenge isibini semali ngexabiso eliphezulu kunexabiso elikwiimarike.
Umahluko phakathi kwexabiso lentengiso kunye nexabiso lakho ngokuyintloko ngumrhumo ohlawulwe kumrhwebi kwaye oku kunokuhlelwa njengentlawulo yekhomishini yeentlobo.
Apha ngezantsi sidwelise eminye imizekelo yokusasazeka kwe-forex-kunye nokubala okucacileyo ukuze ubone indlela yokuyivavanya ngokweepip:
Ukusasazeka kwi-EUR / USD (amanqaku ama-4 edesimali): Njengomzekelo, masithi ixabiso lokubhida li-1.4100 Ixabiso lokubuza liyi-1.4104. Ukusasazeka apha ngu 1.4104 - 1.4100 = 0.0004 okanye 4 iipipi.
Sasaza kwi-USD / JPY (ngamanqaku ama-2 edesimali): Kulo mzekelo, masithi ixabiso lokubhida li-114.11 Ixabiso lokubuza liyi-114.17. Ukusasazeka apha ngu 114.17 - 114.11 = 0.06 okanye iipipsi ezi-6.
Ukusasazeka kwi-GBP / USD (iindawo ezi-5 zedesimali): Ngeli xesha ixabiso lokubhida yi-1.41004 Ixabiso lokubuza liyi-1.41023. Ukusasazeka apha ngu 1.41023 - 1.41004 = 0.0019 okanye 1.9 iipipi. Ngenye indlela, ziipips ezingama-19.
Ukusasazeka kwi-USD / JPY (indawo ezi-3 zedesimali): Kulo mzekelo, ixabiso lokubhida yi-86.770 Ixabiso lokubuza liyi-86.782. Ukusasazeka apha ngu 86.782 - 86.770 = 0.012 okanye iipipsi ezi-1.2. Ngenye indlela, i-12 yeepips eziqhekezayo.
Ngoku masicinge ukuba iqashiso li-100,000 kwaye ufuna ukubala iindleko zokusasazeka. Usebenzisa umzekelo wokuqala apha uza kubala ezi-4 (iipipi) x 100,000 x 5 = $ 200
Ukubala sasaza xa urhwebo lwe-forex luza kuba yinxalenye enkulu yesicwangciso sakho sexesha elide. Kananjalo, kulapho ulwazi lwakho lweepips kunye nokusasazeka kuya kuba luncedo kakhulu.
Kukho iintlobo ezimbalwa ezahlukeneyo zokusasazeka ezisetyenziswa rhoqo ngabarhwebi be-forex:
Silungisiwe: Ibhidi kunye nokubuza ukusasazeka kwexabiso kuhlala kungaguquguquki nokuba zithini iimeko zentengiso.
Eziguqukayo: Olu hlobo lokusasazeka ngamanye amaxesha lubizwa ngokuba 'kukudada'. Oku kuthetha ukuba ixabiso lemali liya kutshintsha kunye nokuhla kweentengiso. Ngexesha apho intengiso ingasebenziyo ukusasazeka kuya kuba sezantsi. Kwicala elisezantsi, xa intengiso isebenza ukusasazeka kuya kuba phezulu.
Ukulungiswa ngolwandiso: Inxalenye enye iya kuchongwa kwangaphambili kwaye umthengisi uya kuthatha isigqibo kwelinye icala. Umzekelo, masithi umthengisi uthatha isigqibo ngexabiso lokuthengisa lemali ethile ngokusekwe kwixabiso lokuthenga. Ukuba ixabiso lokuthenga likwicala eliphezulu umthengisi unokukhetha ukuthengisa loo mali kodwa ongeze i-5% eyongezelelweyo.
Qaphela ukuba ixabiso eliphezulu lokuthenga linokushiya nelahleko ekuqaleni korhwebo lwakho, kodwa ezi lahleko zihlala zifunyanwa ngokuhamba kwexesha.
Imeko yentengiso inokutshintshwa zizo zonke iintlobo zezinto ezinje ngezidubedube zezopolitiko okanye iingxaki zemali. Kananjalo, umbono olungileyo ukulandela iindaba zezezimali xa uthengisa i-forex.
Ekugqibeleni, ukuqonda ukusasazeka kuya kukunceda ubone ukuba ngabaphi abathengisi abanikezela ngezona ndawo zisasazeke ngezantsi kwimarike Forex.
Amaqhinga e-Forex usebenzisa iiPips
Abarhwebi abaninzi baqala ngokutsiba iingceba zemfundo kunye nokuntywila kanye emhadini wengonyama. Ingxaki koku kukuba amatyeli alithoba kwalishumi, kuya kufuneka ujikeleze kwaye wenze uphando ngezi zinto.
Iindlela zokurhweba ziluncedo ngokwenene kubo bobabini abaqalayo kunye nabathengisi abanamava abanamava. Kwaye yeyiphi indlela ebhetele yokuqala ukwenza isicwangciso kunokuba uxhobile ngolwazi ngalo mbandela. Emva kwayo yonke loo nto, yIsicwangciso sethu siza kukunceda ubone ukuba kufuneka uvule nini, uvale kwaye ubambe izikhundla kwimarike.
Iipips zithathwa njengezilula ukugcina iso kwezi ntsuku kwaye abarhwebi ngoku banezicwangciso ezininzi ezijolise ekufumaneni okuthile inani Yeepip. Umzekelo, injongo inokuba kukufumana iipayipi ezili-10 ngosuku.
Inani leepip ezifunekayo kwezi zicwangciso ziyahluka kakhulu kwaye inokuba yiyo nantoni na ukusuka kwishumi ukuya kwikhulu leepip, nganye inexesha elahlukileyo. Injongo yezi ndlela zokurhweba kukufumana izibonelelo ezilingana nenani leepip (ngaphezulu kwelo xesha).
Ukuza kuthi ga ngoku sonke siyazi kakuhle ukuba yintoni ipay kwi-forex, kwaye siyazi ukuba izibini zemali ezifunwayo zezona zibini zilulwelo. Ke njengomzekelo, isibini esingamanzi njenge-GBP / USD kunokwenzeka ukuba siyinxalenye yesicwangciso somrhwebi wombhobho, apho umrhwebi anokujolisa khona kwiipips ezingama-50 ngosuku.
Xa usebenza ngenzuzo yakho, kuhlala kucetyiswa ukuba ukubala umngcipheko ube yinto ephambili. Umzekelo, ukuba isicwangciso sakho kukufumana iipips ezili-12, unokuthatha isigqibo sokungahambi ngaphezulu kwenye i-5.
Kule meko, kuya kufuneka usete i-odolo yokulahleka ukuze uqiniseke ukuba ngokukhawuleza xa ixabiso lidlulile kwixabiso lakho elimiselwe kwangaphambili, ilahleko yakho yokumisa iya kudlalwa ngokuzenzekelayo.
I-Metatrader 4 kunye neePips
I-MetaTrader 4 lelona qonga lisetyenziswa kakhulu lokurhweba ngaphambili kwisithuba. Ngale nto engqondweni, kubalulekile ukuba sixoxe ngokukhawuleza ngendlela iqonga elisebenza ngayo ngokunxulumene neepip.
Ngamafutshane, xa ubona iodolo yefestile ebonelelwe yiMetaTrader 4, awuyi kubona inani leepipi.
Into ekufuneka uyenzile yile:
Kwiwindow yoku-odola, hamba indlela yakho uye 'kuguqula iodolo' yeqonga.
Ngoku unokukhetha amanqaku akho asikiweyo malunga nokuthatha inzuzo kunye nokuyeka-ukulahleka ofuna ukwenziwa ngokuzenzekelayo.
Ewe, ii-odolo zenzuzo zisebenza ngendlela efanayo kwi-stop-loss order. Kungenxa yokuba uyakuzivala ngokuzenzekelayo indawo yakho msinyane nje ukuba inqanaba elichazwe kwangaphambili libethwe.
Ngaphaya koko, 'inqanaba' ngokwemiqathango yeLaymen libhekisa kumaxabiso exabiso. Oku kuza kukrwela umgca kwitshathi kwindawo ethile. Ngenxa yokuba amanqanaba asebenzisa amanqaku endaweni yeepipi, kuya kufuneka ufumane ulwazi lwakho olufunyenweyo olutsha kwiipayipi ziluncedo.
Inye iMetaTrader 4, inqaku lilingana ne-1/10 ye-1 pip. Ke, ukuba uthathe isigqibo sokukhetha amanqaku angama-20, inqanaba lakho liya kuba ziipipi ezimbini ukusuka kwinqanaba lokuqala. Ngaphezulu kokuchaza inqanaba kwitshathi, iMetaTrader 2 iya kubonisa inqanaba kuloo mgama. Umbono kukukunceda uqonde ngcono nayiphi na iodolo elindileyo kwaye uphephe ukuthengisa uxinzelelo.
Abarhwebi abaGqibeleleyo beSebenzisa iSicwangciso esisekwe kumbhobho
Ukuba usifundile isikhokelo sethu kwii-pips ze-forex kuyo yonke indlela, kuya kufuneka ngoku ube nokuqonda okuqinisekileyo kwinto ethethwa yile meko. Ukuba kunjalo-kwaye ufuna ukuzama isicwangciso esisekwe kumbhobho ngoku, apha ngezantsi uza kufumana uluhlu lwabathengisi abaphambili be-forex yokwenza oku.
I-AVATrade liqonga le-CFD elithembekileyo kwi-Intanethi elinikezela nge-forex, ii-indices, amasheya, ii-cryptocurrensets, nokunye okuninzi. Igcina iimfumba zezixhobo zorhwebo, amanqaku, kunye nezalathi zobuchwephesha- kwaye uya kuba nokufikelela kwi-MT4. Iidipozithi ezincinci ziqala kwi- $ 100, kwaye uninzi lobhaliso lweakhawunti luza nebhonasi yokwamkela i-forex.
I-Capital.com yi-FCA elawulwa yi-intanethi ye-intanethi enikezela ngeemfumba zezixhobo zemali. Zonke ziluhlobo lweCFDs - oku kubandakanya i-stocks, indices kunye nempahla. Awuyi kuhlawula nepeni enye kwikhomishini, kwaye ukusasazeka kuqine kakhulu. Izibonelelo zoxhaso nazo ziyafumaneka - zihambelana ngokupheleleyo nemida ye-ESMA.
Sihambile saya edolophini ngokuchaza ukuba zeziphi iipips ze-forex kwaye ziluncedo kangakanani kubarhwebi. Njengoko besesitshilo, iipipsi zincinci, kodwa oko akuthethi ukuba abayipakishi inqindi. Ngapha koko, abathengisi abaninzi bakholelwa ukuba iipipi lelinye lawona macandelo makhulu okurhweba nge-forex xa iyonke.
Utshintsho ngalunye kwinqanaba lokugqibela lokugqibela liza kongeza kunye nefuthe lezo nzuzo zinkulu, okanye ilahleko enkulu. Ukufundisisa olu tshintsho lubonakala ngathi alubalulekanga kwixabiso elidityaniswe nokulandela iindaba zezezimali, ukujonga iitshathi kunye nokunamathela kwisicwangciso sokurhweba kuya kutyebisa amava akho okuthengisa.
Kutheni ungazami iqhinga elisekwe kumbhobho ngokwakho? Njengazo zonke iindlela zokurhweba, oku kuhlala kusebenza ngakumbi xa kusetyenziswa ecaleni kwezinye iindlela.
Umbhobho ubonakalisa utshintsho oluncinci kwixabiso lesibini semali, ihlala iyindawo yokugqibela yedesimali.
Yintoni ukusasazeka kwi-forex?
Ngamafutshane, ukusasazeka ngumahluko phakathi kwexabiso 'lokubuza' kunye nexabiso 'lokubhida' kwisibini semali.
Uyintoni umzekelo wepip?
Masithi utshintsho kwi-EUR / USD ukusuka kwi-1.2571 ukuya kwi-1.2572- le yipipi enye.
Yintoni umbhobho wamaqhezu?
Ngaphandle koko kuthiwa 'yipipette', le sisishumi sepayipi esemgangathweni.
Ngaba zonke iimali zilinganiswa kusetyenziswa iindawo ezi-4 zokugqibela?
Uninzi lwezibini zemali, ngaphandle kweJapan Yen, eziyi-2 iindawo zokugqibela